Karatra Paostaly Avy Amin’ny Vondrom-piarahamonin’ireo Vietnamiana Ao Slovakia · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Laurence Abbé
Voadika ny 06 Septambra 2016 2:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, русский, Deutsch, English
Bratislava, renivohitr'i Slovakia. Sarin'ny pejy Facebook-n'i Loa
Bratislava, renivohitr'i Slovakia, dia tanàna iray miorina any amin'ny lalana vita adiny iray monja, amin'ny fiarabe fitaterana raha miala ao Vienne any Autriche. Firenena kely ao Eoropa Atsinanana izy io izay ahitana mponina miisa eo amin'ny dimy tapitrisa sy sasaany eo ho eo ka ny iray isan-jatony dia teraka tany ivelany avokoa. Vietnamiana manodidina ny 5 000 no hita ao, izay ao andrenivohitra avokoa ny ankamaroany.
Fandehanana fohy amin'ny fiara mitety an'i Bratislava dia tonga ao amin'ny faritra iray izay ahitana Vietnamiana maro ao an-drenivohitra. Eto ny toeram-pisakafoanana Hanoi Garden heverin'ny maro ho toeram-pisakafoanana vietnamiana tsara indrindra ao Bratislava.
Tao no nihaonanay tamin'i Nguyễn Kiên Trung. Tonga tao Slovakia i Trung raha mbola vao 10 taona monja. Miaraka amin-dreniny, tena tafiditra ao anatin'ny vondrom-piarahamonina vietnamiana izay mandray fety sy raharaha maro sady mandray anjara mavitrika anaty fitandroana ireo nentim-paharazana vietnamiana izy. Manazava i Trung fa:
.Heveriko fa manolotra hetsika maro tsy tapaka izy ireo. Mandritra ireo fety goavana toy ny Tet na ny Noely. Mihevitra aho fa tsara ho an'ilay vondrom-piarahamonina izany. Fantatro fa ny vondrom-piarahamonina Košice, ao atsinanan'ny firenena, dia manomana hetsika maro tsy tapaka ihany koa.
Bratislava, renivohitr'i Slovakia. Sarin'ny pejy Facebook-n'i Loa.
Mifampitohy amin'ny tranobe iray izay manana ny lanjany goavana tao anatin'ny fizotry ny vondrom-piarahamonina vietnamiana ny Hanoi Garden. Mpahay siantifika sady mpikaroka ao amin'ny Ivontoerana fianarana momba ny vondron'olona ao amin'ny Akademia Slovaky ho an'ny Siansa, i Miroslava Hlinčíková. Nandritra ireo fikarohany mikasika ny vondrom-piarahamonina vietnamiana, hitany fa efa taloha lavitra be tany ny tantaran'ilay tranobe sy ny faritra, fantatra amin'ny anarana hoe “Dimitrovka” ao Bratislava. Manazava i Hlinčíková fa:
Karazana tanàna natao hatoriana fotsiny ihany i Dimitrovka izay onenan'ireo fianakaviana vietnamiana marobe miaina ao anaty trano hofaina. Tanàna iray ao Bratislava io, izay ahitana ny orinasa tranainy mpamokatra simika fony fotoanan'ny kaominisma ary marobe ireo vietnamiana mpiasa no tonga tao. Saingy taorian'ny fanovàna, nikatona io orinasa mpamokatra simika io. Nefa maro ireo vietnamiana no nijanona. Ary iray tamin'ireo mpandraharaha vietnamiana no nividy an'io trano io. Nohavaoziny ny fanaka, namboariny, ary ankehitriny marobe ireo fianakaviana no monina ao amin'io faritra io. Misy toerana fanatobiana entana, mpanao volo, masoivoho misahana fitsangatsanganana. Azo ata hoe io no fon'ny vondrom-piarahamonina vietnamiana.
Tena tanora ihany koa ilay firenena. Hatramin'ny taona 1946 ka hatramin'ny taona 1989, niaraka tamin'i Tsekoslovakia i Slovakia. Niaraka tamin'ny vondrona sovietika i Tsekoslovakia kaominista ary nandritra io fotoana io no nanorenana niaraka tamin'i Vietnam kaominista ireo fandaharanasa fifanakalozana, hoy ny fanambaràn'i Hlinčíková.
Nandritra ireo taona 70 no nahatongavan'ireo Vietnamiana tao Tsekoslovakia. Nisy ireo fifanarahana teo amin'ny samy governemanta ary fanohanana kely natolotr'ireo Vietnamiana izay tonga teto. Tonga ho toy ny mpianatra izy ireo, indrindra indrindra tany amin'ireo anjerimanontolo, nefa koa ho an'ny fianarana ambaratonga faharoa ary ho toy amin'ny mpiasa tamin'ireo orinasa.
Ny fiarahamonina izay niroborobo dia ny nivondronan'ireo mpiasa mpifindra-monina sy ireo mpianatra, ireo izay nitady làlam-barotra tsy hitany tany Vietnam. Tonga tao Slovakia ireo ray amandrenin'i Trung fony mbola niaraka tamin'i Tsekoslovakia ny firenena, tsy dia mifanalavitra loatra amin'ny zotran'ny hafa ny dian'izy ireo. Milaza i Trung fa:
Ny ankamaroan'ireo olona eto dia mpifindra monina ara-toekarena avokoa, na mpianatra taloha na mpiasa taloha tamin'ireo fandaharanasa fifanakalozana. Tonga teto ny fianakaviako, nony avy eo nanampy ireo mpikambanana hafa tamin'ny fianakaviana tany Vietnam izy mba ho tonga eto. Tsara ny fiainana eto noho ny any Vietnam.
Tamin'ny taona 1989, niaina ny famotehana ny Fanjakana Kaominista tao Tsekoslovakia sy ny fahaterahan'ny Slovakia ary ny Repoblika Tseky ankehitriny, ny Revolisionan'ny Volory, hetsika milamina iray. Ireo vietnamiana mpifindramonina izay tonga tany Eoropa atsinanana vokatr'ireo fandaharanasa fifanakalozana nisy teo amin'ireo Fanjakana kaominista roa tonta dia efa nonina sy nanampy sahady ireo hafa mba hifindra monina. Nantsoin'i Hlinčíková hoe karazana “tambajotranà famindràmonina” io.
Nitarika ireo mpifindramonina vietnamiana ho any Slovakia ireo rohim-pianakaviana nisy tamin'izy ireo, kanefa, izy ireny dia fifandraisana akaiky amin'ny firenena niaviany, izay mampitambatra ireo mpikambanana ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina. Milaza i Trung fa nihetsika ilay vondrom-piarahamonina noho ireo tranga toy ny fitakian'i Shina amin'ireo Nosy Spratley sy Paracels ary ireo krizy mikasika ny maha-olona.
Roa taona lasa izay, nisy fihetsiketsehana iray teto rehefa nalain'ny Sinoa ireo nosy. Io no heverina fa hetsika ara-politika lehibe indrindra tamin'ny tantaran'ny vondrom-piarahamonina vietnamiana teto. Tena navesa-danja. Ireo masoivoho vietnamiana no nitarika azy io eran'izao tontolo izao, mba ho afaka hanao fihetsiketsehana manoloana ireo masoivoho sinoa ireo vondrom-piarahamonina. Anananay mandrakarva io fifandraisana io amin'ny firenena niavianay io. Isan-taona nandefa vola foana izahay hoan'ireo tratry ny loza vokatr'ireo tondradrano. Manangom-bola foana izahay isan-taona. Manolotra zavatra kely ny rehetra
Bratislava, renivohitr'i Slovakia. Sarin'ny pejy Facebook an'i Loa.
Na eo aza ny firaisankina misy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina vietnamiana, mbola misy foana ireo zavatra manahirana. Voafetra ny fisoloana tena azy ao anaty fiarahamonina slovaka ary olana goavana ny fandraisan'ny vahoaka eo an-toerana azy ireo.
Ary na dia maro aza ireo Vietnamiana miasa ao aminà orinasa slovaky na koa mitantana ireo orinasa, miady mafy izy ireo amin'ny fahazoana ny fankatoavan'ny Fanjakana slovaky, izany hoe ny fankatoavana ara-dalàna sy ara-tsosialy ary koa ny fisoloana tena ara-politika. Milaza i Hlinčíková fa azo tsapain-tanana ny maha-vietnamiana, kanefa tsy hita maso.
Raha toa ka miady mafy ireo firenena eoropeana maro miatrika ny fitobahan'ny mpifindramonina sy ireo mpitsoaponenana avy ao Afovoany-Atsinanana sy Afrika Avaratra, sarotra ny fiatrehan'i Slovakia ireo filàn'ny vahoakany mpifindramonina vitsy.
Na ao Bratislava aza, izay onenan'ny ankamaroan'ireo Vietnamiana, dia maro no toy ny tsy misy.
Na maro aza ireo Vietnamiana monina ao amin'ireo faritra ireo, tsy raharahian'ny kaominina akory izany. Tsy anontaniana azy ireo izay ilain'izy ireo sy izay azo atao ho azy ireo. Tsy tena manana kolontsaina marolafy i Slovakia amin'io resaka iray io. Tsy fantany akory izay filàn'ireo vitsy an'isa, ireo mpifindramonina.
Toeram-pivarotana iray anà vietnamiana ao Bratislava. Sarin'ny pejy Facebook an'i Loa.
Kanefa, misy fanantenana ho an'ny hoavy. Arakaraky ny ifandaminan'ilay vondrom-piarahamonina, mitombo ny tsindry ho an'ny fankatoavana ofisialy.
Efa ONG ofisialy telo sahady no tantanin'ireo Vietnamiana. Misy ny Antenimeran'ny Varotra Slovaky-Vietnamiana, ny Vondrom-piarahamonina Vietnamiana ao Slovakia, ary ny Fikambanan'ireo vehivavy vietnamiana. Efa nanolotra fangatahana fanampiana sahady izy ireo. Tamin'ny taona lasa, nahatontosa antsakyn sy andavany ny dingan'ny tetibola misy fandraisana anjara tao Bratislava ny fikambanan'ireo vehivavy vietnamiana, ary nahazo vola mba hanomezana fampianarana fiteny vietnamiana sy slovaky.
Teo amin'ny 50 taona taorian'ny nahatongavan'ireo vietnamiana voalohany mpifindramonina tao Eoropa Atsinanana, mbola tsy azo tsapain-tanana foana ny fankatoavana sy ny fanekena azy ireo. Kanefa, any amin-dry zareo avokoa ireo Vietnamiana an'arivony napetraka tao Slovakia. Ao anatin'ny firenena iray izay tsy zatra vahiny, mamboly fisiana iray izy ireo, mitambatra noho ny fitiavana ny firenena niavian-dry zareo, miasa miadana mba ho lasa tazana ny vondrom-piarahamonina tsy hita maso misy azy ireo.
Henoy ireo tantara hafa mikasika ireo Vietnamiana ao Slovakia:
Nipoitra teo amin'ny pejin'i Loa ity lahatsoratra navoakan'i Nam-An-Dinh ity, tambajotram-baovao tsy miankina iray izay mandefa ireo fanadihadiana mikasika an'i Vietnam amin'ny podcast. Naverin'ny Global Voices navoaka ho ampahany amin'ny fifanekena hifampizara votoatiny.